Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fahasoavan'Andriamanitra
Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fahasoavana tsy manam-paharoa izay anomezan'Andriamanitra hanome ny zavaboary rehetra. Amin'ny heviny midadasika indrindra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa rehetra manambara fambara avy amin'Andriamanitra. Misaotra ny fahasoavana, ny olona sy ny cosmos manontolo dia voavonjy amin'ny ota sy ny fahafatesana avy amin'i Jesosy Kristy, ary noho ny fahasoavana dia manana hery hahatratra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olombelona (izy) mahalala sy tia ary miditra amin'ny fifalian'ny famonjena mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (Kolosiana 1,20; 1 Jaona 2,1-2; Romana 8,19-21; 3,24; 5,2.15-17.21; Jaona 1,12; Efesiana 2,8-9; Titosy 3,7)
"Fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy" hoy ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Galatianina 2,21. Ny hany vahaolana iray ihany, hoy izy ao amin'ny andininy iray ihany, dia ny "fahasoavan'Andriamanitra". Voavonjy amin'ny fahasoavana isika fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna.
Ireo dia mpisolo toerana tsy azo atambatra. Tsy voavonjy amin'ny fahasoavana miampy ny asa ihany isika fa amin'ny fahasoavana ihany. Nilaza mazava i Paoly fa tsy mila misafidy na iray isika. Tsy safidy ny mifidy azy roa (Romana 11,6). "Satria raha ny lalàna dia nahazo ny lova, tsy nomena izany tamin'ny fampanantenana; Fa Andriamanitra kosa dia nanome izany tamin'i Abrahama tamin'ny fampanantenana (Galatiana 3,18). Tsy miankina amin'ny lalàna ny famonjena fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
"Satria raha nisy lalàna mitondra aina, ho avy amin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana" (V. 21). Raha misy fomba hahazoana fiainana mandrakizay amin'ny fitandremana didy, Andriamanitra dia hamonjy antsika amin'ny alàlan'ny lalàna. Tsy tanteraka anefa izany. Tsy mahavonjy olona ny lalàna.
Tian'Andriamanitra hanana fitondran-tena tsara isika. Tiany isika hitia ny hafa ary hahatanteraka ny lalàna. Saingy tsy tiany ny hieritreretantsika fa nanjary antony famonjena antsika hatrany ny asantsika. Ny fanomezana nomeny ny fahasoavana dia midika fa fantany foana fa tsy ho "tsara" isika na eo aza ny ezaka tsara indrindra ataontsika. Raha mandray anjara amin'ny famonjena ny asantsika, dia manana zavatra ho reharehantsika isika. Saingy Andriamanitra dia namolavola ny drafitry ny famonjeny ka tsy hitaky ny fahamendrehantsika ny famonjena antsika (Efesiana 2,8: 9). Tsy afaka milaza mihitsy isika hoe mahazo vola. Tsy afaka milaza mihitsy isika hoe andoavana antsika Andriamanitra.
Io dia mikasika ny fototry ny finoana Kristiana ary mampiavaka ny Kristianisma. Ny fivavahana hafa dia milaza fa afaka manatsara ny olona ny olona raha manandrana mafy. Ny Kristianisma dia milaza fa tsy afaka ny ho ampy tsara isika. Mila famindram-po isika.
Tsy ho tsara ho an'ny tenantsika mihitsy isika ary noho izany ny fivavahana hafa dia tsy ho tsara firy mihitsy. Ny fomba tokana ho voavonjy amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mendrika ny hiaina mandrakizay mihitsy isika, ka ny hany fomba ahazoantsika fiainana mandrakizay dia ny fanomezana antsika zavatra tsy mendrika. Io no tarigetran'i Paoly rehefa mampiasa ny teny hoe fahasoavana izy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena, zavatra tsy ho azontsika mihitsy - tsy hitandrina ny didy ho an'ny arivolivolo.
Jesosy sy fahasoavana
"Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alàlan'i Mosesy" hoy ny nosoratan'i John, ary nanohy hoe: "Ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia avy tamin'i Jesosy Kristy." (Jaona 1,17). Jaona dia nahita tsy fitovian'ny lalàna sy ny fahasoavana, eo amin'ny ataontsika sy ny omena antsika.
Na izany aza dia tsy nampiasa ny teny hoe fahasoavana i Jesosy. Saingy ny fiainany rehetra dia ohatra tamin'ny fahasoavana ary ny fanoharany maneho ny fahasoavana. Nampiasa ny teny hoe famindrampo izy indraindray mba hamaritana izay omen'Andriamanitra antsika. "Sambatra ny mpamindra fo fa hoy izy," fa hamindrana fo izy ireo (Matio 5,7). Tamin'io fanambarana io dia naneho izy fa mila famindram-po isika rehetra. Ary nambarany fa tokony hitovy amin'Andriamanitra isika amin'io lafiny io. Raha manome lanja ny fahasoavana isika dia maneho famindram-po amin'ny olon-kafa ihany koa.
Taty aoriana, rehefa nanontaniana i Jesosy hoe maninona izy no nifandray tamin'ny mpanota malaza, dia hoy izy tamin'ny vahoaka: "Fa mandehana, ka fantaro ny dikan'izany: tiako ny famindram-po fa tsy sorona" (Matio 9,13:6,6, teny avy ao amin'ny Hosea). Andriamanitra dia mifantoka kokoa amin'ny fanehoana famindram-po fa tsy tonga lafatra amin'ny fitandremana ireo didy.
Izahay dia tsy mila manota ny olona. Saingy satria tsy azo ihodivirana ny fandikan-dalàna, dia ilaina ny famindram-po. Mihatra amin'ny fifandraisantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra hahatsapa fa mila famindram-po isika ary koa maneho famindram-po amin'ny olon-kafa. Jesosy dia nanome ohatra tamin'izany rehefa nihinana mpamory hetra izy ary niresaka tamin'ny mpanota - tamin'ny alalan'ny fihetsik'izy ireo dia nasehony fa te hanana fiarahana amintsika rehetra Andriamanitra. Nandray ny otantsika rehetra izy ary namela ny fahotantsika amin'ny fananany ity vondron'olona ity.
Jesosy dia nanambara fanoharana momba ny trosa roa, ny iray trosa be ary ny iray hafa trosa kely kokoa. Namela ny helok'ilay mpanompo naloany be ilay tompo, saingy tsy nahavita namela ny helok'ilay mpanan-trosa taminy hafa izany mpanompo izany. Tezitra ilay tompo ary niteny hoe: "Tsy tokony hamindra fo aminao ve ny mpiara-manompo aminao tahaka ny namindrako fo aminao?" (Matio 18,33).
Ny lesona momba an'io fanoharana io: Tokony hahatsapa ny tenantsika ho mpanompo voalohany isika izay omena vola be. Manalavitra ny fepetra takian'ny lalàna isika, noho izany dia maneho famindram-po amin'Andriamanitra isika - ary tiany ny maneho famindram-po vokatr'izany. Mazava ho azy, na eo amin'ny sehatry ny famindram-po sy ny lalàna, ny ataontsika dia tsy mbola andrasana loatra, noho izany dia tsy maintsy manohy mitoky amin'ny famindrampon'Andriamanitra isika.
Ny fanoharana ilay Samaritana tsara dia mifarana amin'ny antso iray famindrampo (Lioka 10,37). Ny mpamory hetra izay nangataka famindram-po dia ilay nohamarinina teo anatrehan'Andriamanitra (Lioka 18,13-14). Ilay zanaka adala izay nandany vola be ary avy eo nody dia nekena kanefa tsy nanao na inona na inona mba "hahazoana" (Lioka 15,20). Na ny mpitondratena na i Nain na ny zanany dia tsy nanao na inona na inona mba hahazoana fitsanganana amin'ny maty; Jesosy dia nanao izany tamin'ny fangoraham-po fotsiny (Lioka 7,11-15).
Ny fahasoavan i Jesosy Kristy Tompontsika
Ny fahagagana nataon'i Jesôsy dia nanamora ny filàna vetivety. Izay olona nihinana mofo sy trondro dia noana indray. Ny zanakalahy izay natsangana tamin'ny farany dia maty. Fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia tonga amintsika rehetra amin'ny alàlan'ny fihetsika ambony indrindra fahasoavan'Andriamanitra: ny fahafatesany nanao sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ity fomba ity, Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy antsika - miaraka amina mandrakizay fa tsy vokatra maharitra.
Araka ny nambaran'i Piera hoe: "Fa kosa mino ny ho voavonjy amin'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo isika". (Asan’ny Apostoly 15,11). Ny filazantsara dia hafatry ny fahasoavan'Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 14,3; 20,24. 32). Hahazo ny fahasoavana isika "amin'ny alàlan'ny fanavotana izay tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy" (Romana 3,24) voamarina. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny sorona ataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy dia maty ho antsika, noho ny fahotantsika, ary voavonjy isika noho izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana (V. 25). Manana fanavotana amin'ny alàny isika (Efesiana 1,7).
Saingy mihoatra lavitra ny famelan-keloka ny fahasoavan'Andriamanitra. Nilaza amintsika i Lioka fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia teo amin'ny mpianatra rehefa nitory ny filazantsara izy ireo (Asan’ny Apostoly 4,33). Naneho fankasitrahana tamin’Andriamanitra izy ireo tamin’ny fanomezana fanampiana izay tsy mendrika azy ireo. Saingy tsy ny zanak'olombelona no manao toy izany? Tsy ny zanakay ihany no omentsika rehefa nanao zavatra tsy mendrika izy ireo, omenay fanomezana izay tsy mendrika azy izy ireo. Ampahany amin'ny fitiavana izany ary taratry ny toetran'Andriamanitra. Ny fahasoavana dia malala-tanana.
Rehefa nandefa an'i Paul sy i Barnabasy tamin'ny dia misionera ny fiangonana tao Antiokia, dia nandidy azy ireo tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo (Asan 'ny 14,26; 15,40). Amin'ny teny hafa dia nandidy azy ireo izy ireo mba hikarakara an'Andriamanitra, matoky izy ireo fa hikarakara ny mpandeha Andriamanitra ary hanome azy ireo izay ilainy izy ireo. Izany dia ampahany amin'ny fahasoavany.
Ny fanomezana ara-panahy dia asan'ny fahasoavana ihany koa. "Manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika" hoy i Paoly hoy ny fahasoavana nomena antsika " (Romana 12,6). «Fa samy nomena fahasoavana araky ny fahasoavan’i Kristy» isika rehetra (Efesiana 4,7). "Ary mifanompoa ny tsirairay, samy manana ny fanomezam-pahasoavana azony, dia ilay mpitandrina tsara ny fahasoavan'Andriamanitra" (1 Petera 4,10).
Nisaotra an 'Andriamanitra i Paoly noho ny fanomezam-pahasoavana nananany izay nomen'ireo mpino azy ireo (1 Korintiana 1,4: 5). Natoky izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho be tokoa eo amin'izy ireo ary ahafahany mitombo bebe kokoa amin'ny asa tsara rehetra (2 Korintiana 9,8).
Ny fanomezana tsara rehetra dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, vokatry ny fahasoavana fa tsy zavatra mendrika azy. Noho izany dia tokony ho velom-pankasitrahana isika noho ireo fitahiana tsotra indrindra, noho ny fihirana ny vorona, ny fofona ny voninkazo ary ny fihomehezan'ny ankizy. Na ny fiainana aza dia harena manankarena fa tsy zavatra ilaina.
Ny asa fanompoana nataon'i Paoly manokana dia nomena azy tamin'ny fahasoavana (Romana 1,5; 15,15; 1 Korintiana 3,10; Galatiana 2,9; Efesiana 3,7). Izay rehetra niriny dia tiany atao araka ny fahasoavan'Andriamanitra (2 Korintiana 1,12). Ny tanjany sy ny fahaizany dia fanomezam-pahasoavana (2 Korintiana 12,9). Raha afaka mamonjy sy mampiasa ny ratsy indrindra amin'ny mpanota rehetra Andriamanitra (izany no namaritan'i Paoly ny tenany), azony atao ny mamela heloka sy manasa antsika tsirairay avy. Tsy misy mahasarika antsika amin'ny fitiavany, ny faniriany hanome antsika fanomezana.
Ny valinteninay amin'ny fahasoavana
Ahoana no tokony handraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra? Miaraka amin'ny fahasoavana, mazava ho azy. Tokony hamindra fo isika, toa ny mamindra fo Andriamanitra (Lioka 6,36). Tokony hamela ny hafa isika, sahala amin'ny namelan-keloka. Tokony hanompo ny hafa sahala amin'ny nanompoantsika antsika isika. Tokony ho tsara fanahy amin'ny hafa isika amin'ny fanehoana hatsaram-panahy sy hatsaram-panahy amin'izy ireo.
Tokony ho feno fahasoavana ny tenintsika (Kolosiana 4,6). Tokony ho tsara fanahy sy hamindra fo isika, mamela heloka ary mamela heloka eo amin'ny fanambadiana, eo amin'ny raharaham-barotra, any am-piasana, any am-piangonana, amin'ny namana, fianakaviana ary olon-tsy fantatra.
I Paoly koa dia nanonona ny fahalalahan-bola ho toy ny asan'ny fahasoavana: «Nefa fantatray, ry rahalahy malala, ny fahasoavan'Andriamanitra izay omena ao amin'ireo vondron-tanin'i Makedonia. Satria nanam-pitiavana ny fifalian'izy ireo rehefa notsaraina tamin'ny fahoriana be, ary na dia mahantra aza izy ireo, dia nanome be dia be tamin'ny fahatsorana rehetra. Satria araka ny heriko dia mijoro ho vavolombelona aho ary nanome an-tsitrapo ny herin'izy ireo » (2 Korintiana 8,1: 3). Nahazo be dia be izy ireo ary vonona hanome betsaka.
Ny fanomezana dia fahasoavana (V. 6) sy ny fahalalahan-tanana - na eo amin'ny lafiny ara-bola, ny fotoana, ny fanajana na ny hafa - ary fomba mety ho antsika izany hamaliana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho antsika mba hahasoa antsika. hotahina anie (V. 9).